Muran ka taagan magac ka badalidda garoonka kubadda gacanta - BBC Somali
Muran ka taagan magac ka badalidda garoonka kubadda gacanta
13 Jannaayo 2012
Image caption Garoonka kubadda gacanta
Guddoomiyaha fulinta kubadda gacanta eeBritain, paul Goodwin ayaa sheegay in go’aanka lagu badalayo magaca garoonka kubadda cagta oo loo bixinayo Copper Box, in uu yahay mid qalad ah.
Magaca cusub wuxuu la xiriiraa waxyaabo loo isticmaalay dibedda ilaa 7 kun oo kuraasta garoonka ah.
Balse, xiriirka Kubadda gacantaBritainwuxuu bilaabayaa olole loogu talogalay in magacii hore lagu celiyo garoonka.
Paul Goodwin guddoomiyaha kubadda gacanta wuxuu leeyahay “muhiim ayay noo tahay in magaca garoonka uu sidiisa ahaado…Tartanka Olympic-da ayaa cayaarta kubadda gacanta fursad wayn u siiyay in uu magac ahaan koro, waxaana muuqata in aan taas ku guulaysanayno.”
Kubadda gacanta Britain waxaa cayaaraha lagu soo daray sanadkii 1936 ee ka dhacay magaalada Berlin, iyadoo kooxda dumarkana la bilaabay sanadkii 1976 in ay Olympic-ga ka qaybgalaan, kaas oo ka dhacayay magaalada Montreal.